लघुकथा: समय - Ujyaalo Nepal
By ujyaalo	 On १८ बैशाख २०७८, शनिबार ०३:४२ 7
-“ओई सम्झना एउटा कुरा थाहा पाइस्?” -” के कुरा भन् न मथुरा?” -“कसैलाई नभनेस् नी मैले भनेको भनेर, तंलाई मात्र सुटुक्क भनेकी ,राधीकाकी छोरी त हिनिछ नी।” -” ए हो र ? कस्ता सॅग गईछ?” -” संगै पढ्ने रे जात पनि मिल्दैन रे।” -” बर्बादै भएछ नी है? झन् मैले केटी असल जस्तो लागेर पछि हाम्रो भाइलाई कुरो चलाऊँ की जस्तो लगेको थियो।” -“त्यही त भन्या ,बेलैमा बिहे गरिदेवो भन्दा कानमा तेल हालेर बसे त्यही भएर मैले त बाह्र सक्ने बित्तिकै दुबै छोरीलाई दिएकी, काम सकेर बसेपछि आनन्दै की कसो?” -“तैले पनि अब गरिदे बिहे फेरि राधीकाकी छोरीले झै नाक काटेर हिँडी भने?” -“हुन्छ नी मथुरा ,तर आफू माईतीमा पढ्न नपाएकोले अहिले यति दु:ख भोगेकी छू, तर छोरीले दु:ख नपावोस् भनेर पढाइमा बल गरेकी हुँ।” त्यत्ती कुरा सुनाउन आएकी मथुरा आफ्नो बाटो लागि ।
त्यसरी नै अर्काको भत्के बिग्रेको कुनै कुरा थाहा पाउने बित्तिकै बढी चासो दिएर कसैलाई नी नभन्नु भन्दै गाॅऊ चाहार्ने बानीले मथुरालाई कसैले मन पराउॅदैनथे। उसलाई बीबीसी भनेर नाम राखेका थिए। तीन सन्तानकी आमा दुई छोरीलाई बेलै माथि दिएको भएर उनी ढुक्क थिइन् र अर्काको चियो चर्चो गर्दै हिड्दथिन्।
एकदिन छोरो अबेला सम्म घर आएन सबै चिन्तामा परे साधनमा हिड्ने मान्छे कतै केहि भयोकि भनेर खाना कुरेर पीर मान्दै झोक्राएर बसेका थिए। भोलिको रोपाई मथुरा बाऊसे र खेताली खोज्नू पर्ने भन्दै भारी मन लिएर खेतालो खोज्न निस्कीईन् । त्यतै तिर जाने भएपछि बाउसो र फोरुवा अर्चापेर ल्याउनु पर्यो भन्दै एक पन्थ दो काज लिएर घरबाट निस्किइन्। आरनमा पुग्न नपाउॅदै हर्क बहादुरले टाढैबाट भने, -” नमस्कार संधीनी ज्यू एका बिहानै कति कामले पाल्नु भयो? छोरीले हिजो राती फुन गरेकी थिई ।”
प्रकाशित: १८ बैशाख २०७८, शनिबार ०३:४२
दिनेशराज पुरीको ‘धारै नखोली’(भिडियोसहित)
कमिसनमा हालेर ल्याउने हो सुइ…..